Nezvedu - Zhengzhou Fangming Hi-Temp Ceramic New Material Co, Ltd.
Nyoro Certification Kufanirwa
Zhengzhou Fangming Yakakwira-Tembiricha Ceramic Nyowani Zvinyorwa Co, Ltd. yakavambwa mu 2015. Iyo yakashomeka yezvikwereti kambani yakatangwa uye kusimbiswa nemunhu chaiye ane yakanyoreswa capital ye10 miriyoni Currency. Iyo indasitiri munda ndiwo munda wezvinhu zvitsva. Iyo yakabatana yemagariro echikwereti kodhi kodhi ndeye 91410183356181033L. Iyo State Key Laboratory yeWuhan University yeSainzi neTekinoroji, Shaanxi University yeSainzi neTekinoroji, Henan Institute of Technology uye mamwe masangano akagadza kwenguva refu indasitiri-kuyunivhesiti-kutsvagiridzana kubatana.
Iyo kambani inovhara nzvimbo inopfuura 12,000 mativi emamirimita, huwandu hwevashandi hwunopfuura makumi mashanu neshanu, anopfuura mazana mana seti (seti) emidziyo yakasiyana siyana, ine goho regore rinosvika Matani zviuru makumi maviriyeiyo yakachena-yakachena uye yekupedzisira-yakakwira tembiricha nyowani inoumbwa nano-zvedongo zvinhu uye zvigadzirwa, izvo zvinokurudzirwa nenyika iri Yakagadzirwa muChina 2025 kuronga katarogu. Uye mune yakakosha nyowani yezvinhu chikamu, yepamusoro-tech yekugadzira mabhizinesi easingawanzo epasi anoumbwa matsva zvinhu zvinoshandiswa munzvimbo yakanyanyisa nharaunda Ultra-yakakwira tembiricha yemahara maceramics ayo anokurumidza anoda kufambisa akakosha matekinoroji. Bhizimusi hombe ndiko kutsvagisa nekusimudzira, kugadzirwa uye kutengesa kweano-zirconia zvinhu uye zvigadzirwa; kupinza uye kutengesa kunze kwenyika zvinhu uye matekinoroji.
Iyo ine yayo inopfuura 40 patentsuye awana 2 yesainzi uye tekinoroji budiriro yekuongorora zvitupa mudunhu reHenan. Ndiyo inotungamira yekuvandudza timu timu yeZhengzhou Guta 1125 Jucai Chirongwa. Mumakore maviri apfuura, yakapedza uye yakapfuudza anopfuura gumi nematanhatu zvinyoro zvitupa (kusanganisira Henan yematunhu yakakosha Jingtexin Enterprise Kuchengetedza Kufanirwa, National High-tech Enterprise Qualification, Zhengzhou Intelligent Kugadzira Kuratidzira Bhizinesi Kufanirwa, Kudzivirira Kugadzira Standardization Qualification, Kaviri Kudzivirira Kufanirwa, Hunhu, Hutano, Zvakatipoteredza, Energy Management System Kufanirwa, Kuvimbika Management System Kufanirwa, 5A Yakanaka mamiriro ematanho, kusanganisa kugona kweindasitiri uye kwemaindasitiri, kugona kwehungwaru pfuma manejimendi manejimendi system, nezvimwewo).
Iyo kambani inowanzo kuvandudza uye inogadzira Ultra-yakakwira tembiricha uye yakakwira-yakachena macomputer maceramic zvigadzirwa zvinoenderana ne oxide nano zvinhu. Iyo chigadzirwa mamiriro ndeye nano, micron poda, granular zvinhu uye zvakasiyana-siyana Ultra-yakakwira tembiricha yakasarudzika-yakaumbwa chimiro ceramics inoshandiswa munzvimbo dzakanyanyisa nharaunda; application tembiricha munda Iyo nharaunda ye0 degrees Celsius kusvika 2700 degrees Celsius, nharaunda yekushandisa ndeiyi: mweya, vharuvhu, inodzivirira mhepo, nezvimwe. Iyo yekushandisa minda yakanyanya tembiricha inonyungudusa kuyerera kudzora, yakakosha magirazi ekugadzira, makristasi ekugadzira, makristasi e-laser, semiconductor zvinhu kukura, nharembozha girazi rinovhara 3D kukotama, Iyo yekunyungudusa ye titanium alloys, nezvimwe; iwo maratidziro ekuita akateedzana eakakwira-kuchena zirconia yekuisa zvigadzirwa chinzvimbo chekutanga muindasitiri yekumba; mhando uye tekinoroji yezvakateedzana zvigadzirwa zvakagadzirwa nekambani iri kutungamira pasi rese, uye yakabudirira kutsiva Germany neUnited Kingdom mumisika dzakaita seIndia neRussia. Mirira kushandiswa kwezvigadzirwa zveEuropean.
Densification uye sintering composite yakakwira zirconium zvidhinha (shandisa tembiricha 0-1720 ℃, density 5.10 g / (25 ℃))
Pfungwa yerudzi nyowani yeiyo yepamusoro-zirconium ceramic multifunctional composite zvidhinha yakavakirwa pakukanganisa kwezvazvino zvakasanganiswa zvakakwirira-zirconium zvidhinha zvakaita sekumisa ngura uye kupera kwemhepo, hombe hombe yekuvaka vhoriyamu, simba guru rekushandisa uye zvimwe zvikanganiso, uchishandisa yakasanganiswa mubatanidzwa wezvikamu zvitatu zvezvinhu zvakasiyana Iyo ine hunhu hwekucheka kugadziriswa uye yakasanganiswa sintering interface fusion. Iyo ine yakanaka yekupisa yekuisa, yakaderera gradient kupisa kupisa, uye zvakasiyana zvinhu zvegorosi kuramba uye kukosora kusagadzikana kwenzvimbo yekushanda inosangana neye girazi mhinduro. Iyo yakakamurwa kuita matatu-maseru musanganiswa, ayo ari kushanda Layer, chengetedzo dura uye kuputira dura.
Izvo zvakafanogadzirirwa kuti hukobvu hwehutachiona hwekuputira i150 mm, ukobvu hwenzvimbo yekuchengetedza i150 mm, uye ukobvu hwesimba rekushanda iri 20-80 mm, iyo inogona kugadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi.
Schematic dhizaini yeakakwira zirconium ceramic multifunctional inoumbwa nezvidhinha chimiro
Tora zvikamu zvitatu zvezvinhu zvakasiyana kuti uparadzanise uye ubatanidze kuita yakasanganiswa nzira yekubatanidza, uye shandisa gradient composite tekinoroji yezvinhu zviviri kana kupfuura kuita kuti kuumbwa uye chimiro shanduko zvienderere mberi kubva kune rimwe divi kuenda kune rimwe divi kudzikisa Zvidiki uye kukunda kuita kusingaenzanisike chiitiko chechikamu chekubatanidza, kuti uwane kutsakatika kwechimiro chemukati, mashandiro echinhu ichi zvakare chinopa shanduko yechimiro inoenderana nekuchinja kwechimiro uye chimiro.
Iyo inoshanda dura inotora zirconium-yakavakirwa yakasimba mhinduro zvinhu zvekudzivirira kukanganisa kweyakagadzikana zirconium kudzikamisa chiyero chekweguru nekuora. Iko kusanganiswa kwe micron uye nanometer powders ine zirconium zvemukati zvakatangira kubva pa80-94%, ichiwana sintering 99% densification, uye porosity padyo ne0. Iyo tembiricha yekudzivirira inosvika 1750 degrees Celsius nechinangwa chekushandisa kwenguva refu, kuitira kubata iyo yenguva refu yenguva dzose girazi mhinduro kukukurwa uye mamiriro ekurova eiyo inoshanda dura, uye yakazvipira kuzadzikisa ka2 kana kupfuura kupfuura hupenyu hwazvino 41 # yakasanganiswa zvidhinha.
Iyo yekudzivirira dura inogadzirwa neiyo yakakwira-yakachena alumina mbishi zvinhu kana zirconium silicate. Basa rayo rinoratidzwa mune refu-refu yekushandisa chengetedzo garandi mushure mekushanda dura. Panguva imwecheteyo, ine yakanaka yekupisa gradient kudzikisira basa.
Iyo yekumhara dura inogadzirwa nefiber zvinhu izvo zvinokwanisa kumira tembiricha inosvika 1650 madigiri Celsius, uye kwayo kupisa kwekushisa kwakadzika. Kana iyo dhizaini dhizaini ichishandiswa pa100-150 mm, kana iyo tembiricha yekupisa inosvika 1400 degrees Celsius, iyo tembiricha yepasi yakadzika kupfuura 60 degrees Celsius. (Inesarudzo maererano nemamiriro ezvinhu)
Targeted yekushandisa mhinduro kune yakakwira-calcium, yakakwira-sodium, yakakwira-fluorine, yakakwira-bharamu, uye yakakwira-boron girazi
Zvinoenderana nemhando dzakasiyana dzegirazi, zvinoenderana nehunhu hwayo, unogona kusarudza:
Calcium zirconate solid solution (shandisa tembiricha 0-1720 ℃, nzvimbo yakanyunguduka 2250-2550 ℃, density 5.11 g / (25 ℃))
Barium zirconate solid solution (shandisa tembiricha 0-1720 ° C, nzvimbo yakanyunguduka: 2500 ° C, huwandu: 5.52g / ml (25 ° C))
Yttrium-zirconium solid solution (shandisa tembiricha 0-1720 ℃, nzvimbo yakanyunguduka: 2850 ℃, density: 4.80g / ml (25 ℃))
Mirira kushandiswa kwakanangwa kwezvigadzirwa zviri pamusoro kuti zvikurudzire ivo kuti vadzikise kukuvara kwechimiro kunokonzerwa nekushanduka kwemakemikari patembiricha yakakwira, nokudaro nekuvandudza hupenyu hwebasa uye kuchengetedzeka kwezvigadzirwa zvegirazi. Naizvozvo, zvichienzaniswa neyechinyakare zvigadzirwa, yakanangwa kushandiswa kwezvinhu zvekusimudzira kuwedzera kwehupenyu Iyo zvakare imwe yeanoshanda nzira.
Yakagadzika zirconium zvigadzirwa, shandisa tembiricha 1800-2200 ℃, density 5.10 g / (25 ℃)
Iyo tembiricha yekushandisa iri 0 degrees Celsius kusvika 2700 degrees Celsius, nharaunda yekushandisa ndeiyi: mweya, mweya, mhepo yekudzivirira, nezvimwe, nzvimbo dzekushandisa dzakakosha kugadzirwa kwegirazi, titanium alloy smelting, nezvimwe.
Iyo splicing gap iri 0.2-0.5 mm, uye inogona kushandiswa seyipapo yekubatanidza chirongwa. Linear yekuwedzera mwero we0-1000 ℃ ndeye 5.5 × 10-6,0-1000 ℃ uye iyo urefu hwakaenzana shanduko mwero ndi0.08%.
Mushure mekushisa kwekushandisa kwapfuura 1700 ° C, zvakajairika zirconium zvigadzirwa hazvichakwanise kusangana nezvinodiwa-zvenguva refu zvekushandisa mushure me1750 ° C nekuda kwekudzikamisa kwavo mutoro, mvura inonaya chikamu, uye kushanduka kwemakemikari. Mushure me1750 ° C, echinyakare epamusoro-zirconium zvinhu zvinoshandiswa. Zvinhu zvakadai seAZS zvinowedzera kukuvara uye kukukurwa. Naizvozvo, yakatsiga yakakwira zirconium zvinhu kana yakasimba mhinduro zvigadzirwa zvinofanirwa kushandiswa mune yekupedzisira-yakanyanya tembiricha nharaunda mushure me1750 ℃ ​​kusangana nemamiriro ekureba-kwenguva refu-yakanyanya tembiricha yekushandisa uye mamiriro asiri nyore kuita nezvimwe zvinoshanda zvinhu. Kana tembiricha yakakwira kupfuura 1750 ° C yekubata kwenguva refu nemagirazi mhinduro kana mamwe mhinduro dzesimbi, hupenyu hwedzidziso hwepamusoro zirconium zvinhu zvine tembiricha yakakwira kupfuura 1800 ° C-2200 ° C inogona kuwedzerwa ne 2-3 nguva.
Pasina kuenderera mberi kwekuvandudza, hakuzove nehunhu, uye hazvigoneke kukwikwidza kumatunhu ekuraira nevamwe vekuEurope vane nhoroondo refu uye yakasimba yesainzi yekutsvagisa hwaro zvakanakira padanho repasi. Kutanga kubva pakuiswa kwekambani mumunda we Ultra-yakakwira tembiricha yezvivakwa zvedongo zvitsva muna 2015, kambani Zvakadzika kuita indasitiri-kuyunivhesiti-kutsvagirapamwe pamwe nevakawanda vanozivikanwa mayunivhesiti epamba, kupa kutamba kwakazara kune kwayo kwayo nyaya zvakanakira, uye sangana iwo mabhenefiti ekutsvagisa yunivhesiti indasitiri-kuyunivhesiti-kutsvagurudza kuenderera mberi nekuvandudza nekuenderera mberi nekushandisa zvigadzirwa kuminda mitsva. Iyo kambani ine gumi nemaviri akazvimirira ekugadzira patent, ayo anoshanda 29 matsva patent.
Pasi pekufungidzira kwekutungamira musika nekombiki tekinoroji, kambani yakagadzira chigadzirwa chiitiko ruzivo garandi dhipatimendi yekupa vatengi yakachengeteka, inoshanda uye nekukurumidza imwe-yekumira yekushandisa ruzivo, kushingairira kutsvaga nyowani chigadzirwa chekushandisa matambudziko nekuvandudza kugadzirisa, uye kupa vatengi inoshanda uye yakagadzikana zvigadzirwa Panguva imwechete yekushandisa ruzivo, isu ticharamba tichivandudza iyo nyowani nyowani yechigadzirwa application.
Chete nenzira iyi vatengi vanogona kuva nepfungwa yekushandisa kunamatira, kuchengetedzwa kwekushandisa, uye kunyaradza kwekushandisa. Chete nenzira iyi, denderedzwa rine hunhu rinogona kuumbwa, uye chikamu chemusika wechigadzirwa uye kugadzikana zvinogona kuenderera. Ndiwedzere uye zvakasimba kutsigira chekambani R & D uye kushanda simba; inotsigirwa neiyo yepamoyo tekinoroji yekuenderera nekuvandudza, zvigadzirwa zvekambani parizvino zvine kugona kuzere kuita uye neruzivo. Panguva imwecheteyo, vane mukana wakakura-unodhura mumisika yepasi rose iri kusimukira. Vakatokwikwidza neGerman neUnited Kingdom. Musika unogarwa nezvigadzirwa zvakafanana munyika dzakabudirira seJapan neJapan zvakabuda.
Mhedziso yekuvandudza kwekambani kufunga uye kutungamira: Kutarisa pamunda we zirconium dioxide zvinhu uye zvigadzirwa, kuburikidza nekusagadziriswa kwekudzokorodza zviwanikwa kuburikidza neyegreen yekugadzira sisitimu, ichitarisa mukushandiswa kwekutsvaga kwekutsvaga uye kusimudzira, nzira itsva dzekugadzira, uye mashandiro ekushandisa masimi mumunda we zirconium dioxide zvinhu uye zvigadzirwa,
Kuti uwane inoenderera mberi yekuvandudza uye yekushandisa-yakatarwa michina uye inogara yakasimba hutano, simudzira chiziviso chiziviso muindasitiri, uye gadzira iro ramangwana rekambani kusimudzira nhungamiro pahwaro hwekuganhurirwa tekinoroji uye ruzivo rwekunaya uye risingaperi mashandisirwo eminda uye mashandiro ekuvandudza!
Gadzirisa zvipingamupinyi mumagetsi ekupisa-akanyanya
Iva bhenji rekuyera mukusimudzira kwakasimba kweiyo yakakwira-yakakwira tembiricha yemahara ceramics indasitiri
Kuvimbika, kurota, kushanda nesimba, hunyanzvi;